AKHRISO Xogtii Ugu Dambaysay Ee Heshiiska Bruno Fernandes, Man United Oo Dalabkii Hore Wax Ka Bedeshay & Halka Ay Wax Marayaan. - Gool24.Net
Waxa wali wada xaajood u dhaxeeyaa kooxaha Manchester United iyo Sporting Lisbon oo kala doonaya khadka dhexe ee Bruno Fernandes, Heshiiskan oo la filayay in la dhammaystiro maalmihii ina dhaafay ayaa sidii la filayay ka daba dheeraaday.
Man United ayay ka go’antahay inay lasoo saxeexato khad dhexe oo cusub kahor xidhitaanka suuqa bishan January sababtoo ah inay dhaawacyo ka gaadheen xiddigihii muhiimka uga ahaa booskaas ee Paul Pogba iyo Scott McTominay.
Sida imika lagu sheegay il wareedka Platforma, Red Devils oo markii hore doonayay inay kaliya bixiyaan 42 Milyan oo qadin ah iyo gunooyin shuruudo ku xidhan ayaa haatan horumarin ku sameeyay dalabkii hore.
Warbixinta Platforma ayaa intaas ku daraysa in heshiiska labada kooxood u dhaxeeyay uu markii hore qarka u saarnaa inuu bur-buro balse uu haatan sidii hore kasoo wanaagsanaanayo.
Labada kooxood ayaa imika doonaya inay meel dhexaad iskugu yimaadaan oo midkasta ka tanaasulo aragtidii hore iyagoo lacag dhan 55 Milyan oo euro (46.9 Milyan oo Pound) oo lagu daray gunnooyin ku dhammayn kara waxkasta.
Fernandes oo ciyaaray dhammaan daqiiqadihii kulankii ay kooxdiisu guuldarrada 2-0 ka ah kala soo kulantay Benfica ayaa sidoo kale xiddigaha kale ee kooxda sidii caadiga ahayd tababarka ula qaatay Isniintii.
25 sano jirkan ayaa lagu wadaa inuu kasoo muuqan doono kulanka ay kooxdiisa tartanka Taca da Liga la ciyaarayso dhigeeda Braga Salaasada maanta ah.